China chiyero chekushandiswa kwehydrated aluminium peta Kugadzira uye Fekitori | Teng'an
Iyo chiyero chekushandisa kwehydrated aluminium paste
Aerated aluminium poda puru rudzi rutsva rwezvinhu zvakagadzirwa. Yakave ichishandiswa zvakanyanya mumaindasitiri mazhinji senge aerated kongiri gasi inoburitsa mumiririri, mafaya firework, simbi ye thermite, sirivheri pendi kukwesha nezvimwewo.
Kukura kwekushandisa kwechigadzirwa
Aerated aluminium poda yakabata yakakosha basa mukugadzira uye kuvaka kwemaindasitiri akasiyana siyana. Iko kushandiswa kukuru mumunda wekirati ine aerated ndiko kuita kwemakemikari kwesilica, poda yealuminium, quicklime, nezvimwe panguva yekugadzirwa kwekuwana gasi kuburitswa. Nenzira iyi, iyo porous chimiro inogona kuoneka mukati mekongiri block inogadzirwa.
Aerated aluminium poda poda yakagadzira yakaenzana nzira yekuyerera mukushandisa kwemakemikari ekiriniki. Izvo zvinodikanwa kuti uise iyo aerated aluminium poda poda mune iyo aluminium poda slurry chisanganiso. Mushure meaarated aruminiyamu poda poda yakanyatso kumisikidzwa Isa iyo svutugadzike yealuminium poda padanho rehuremu hwealuminium poda slurry, uye isa chiyero chakaringana cheaerated aluminium poda slurry uye mbishi zvinhu zvakadai sekukurumidza, kubhururuka madota uye gypsum mukati me kudira chisanganiso, icho chinogadzirwa nemakemikari anoita pakati peaerated aruminiyamu poda poda uye nemidziyo Chinhu chealkaline chinogona kuburitsa hydrogen nemamwe magasi mairi, kuti uwane iko kuita kwebhuruu, kuitira kuti huremu hwezvidhina zvakagadzirwa hudiki kwazvo kupfuura zvigadzirwa zvakagadzirwa neyakajairwa nzira yekugadzira, uye yekubatsira kugadzirwa kuburikidza neairated aruminiyamu poda peti zvakare iri Imwe yeiri nyore uye akareruka mhando eakadhirowa kugadzirwa anogona kutopfuura hafu yekurema kweakajairika zvidhinha zvidhina zvivakwa.
1 Yakakwirira kugona: Yedu fekitori zvigadzirwa 30 matani ealuminium poda peta zuva rega rega.
2 Yakakwira mwero: National standard yekugadzira tambo uye yakajairwa kutumira kunze kwakapakurwa.
3 OEM uye ODM: OEM neODM zvinogamuchirwa.
4 Professional timu yebasa: Tine makore anopfuura gumi ekuziva ruzivo. Isu tinogona kuve kekutanga nguva yako kugadzirisa matambudziko mukuita kwekushandisa aluminium poda poda.
A: Tiri fekitori ine vashandi vanopfuura makumi mana vane hunyanzvi.
Mubvunzo: Ndeipi nguva yako yekuendesa iyi odha?
A: Kazhinji nguva yedu yekuendesa inguva mazuva mashanu kusvika mashanu.Kana zvinhu zviri mudura kana mazuva gumi nemashanu kusvika makumi matatu nemashanu kana zvinhu zvisipo, zviri maererano nehuwandu.
Mubvunzo: Unogona here kuwedzera yedu logo pane zvigadzirwa?
A: Ehe, Isu tinopa sevhisi yekuwedzera vatengi 'logo pane zvigadzirwa.
Mubvunzo: Uri kugadzira wega here?
A: Hongu, tiri.Tine fekitori yedu.Tinogamuchirwa neushamwari kushanyira fekitori yedu chero nguva.Tinogona zvakare kukutora iwe kunhandare yendege uye chiteshi.
Q. Ndingawana dhisikaundi here?
A: Hongu, Kwekurongeka kukuru uye Kakawanda kweVatengi, isu tinopa zvine musoro kutapudzwa.
Kana iwe uine mumwe mubvunzo, gamuchira kundibata!
Pashure: Hunhu hwealuminium poda
Zvadaro: Nezve aerated kongiri matombo uye mahwendefa (AAC / ALC)
aac misa mbishi zvinhu reshiyo
aruminiyamu poda yekristaro yakasanganiswa
aluminium poda yekongiri chivakwa
Aqueous aluminium poda poda